AirTag: hawlgal, qaabeyn, xaddidnaan ... | Wararka IPhone
AirTag: hawlgalka, qaabeynta, xaddidnaanta ... dhammaantood waxaa lagu sharraxay fiidiyow
Ma rabtaa inaad ogaato sida AirTags u shaqeyso? Noocyada iPhonekee ayaa sida ugu badan uga faa'iideysta? Sidee bay kaaga caawin karaan inaad hesho alaab lumay? Wax walba waxaan kuugu sharaxeynaa fiidiyowgaan si aad u heysato si aad u cad oo kaa caawin kara inaad ogaato inaad u baahan tahay iyo in kale.
Sumadaha cusub ee tilmaamayaasha Apple, oo ay u ballaadhisay "AirTag" sidii aan dhammaanteen fileynay, waxay la yimaadeen astaamo badan oo cusub iyo arrimo kala duwan oo ka dhigaya iyaga badeecad runtii xiiso u leh adeegsadayaasha Apple. Asturnaanta, nidaam raadin ah oo lagu dhex daray macruufka iyada oo aan loo baahnayn in la soo dejiyo codsiyada, dhammaan shabakadaha adduunka ee iPhone iyo iPad ee aad gacanta ku hayso si aad u hesho sheygaaga lumay raadinta saxda ah ee mahadsanid U1 Chip taasi kaliya kuu sheegi mayso inaad u dhowdahay laakiin sidoo kale waxay tilmaamaysaa jihada ay tahay inaad u dhaqaaqdo si aad u hesho, isdhexgalka Siri si aad uga raadiso shaygaaga amarrada codka, qaab lumay oo u oggolaanaya xitaa dadka isticmaala Android inay aqoonsadaan milkiilaha AirTag si loola xiriiro haddii ay helaan ... astaamahan iyo kuwo kale oo badan ayaa ka dhigaya astaamahan tilmaameyaasha in ay gaar u yihiin suuqa xilligan.
€ 35 waxaad ku iibsan kartaa AirTag, sidoo kale waxaad ku buuxin kartaa qalab aan tiro lahayn oo horeyba looga heli jiray Apple iyo shirkadaha kale ee soo saara, oo lagu daray dhammaan kuwa imaan doona toddobaadyada soo socda. Xitaa waad u duubi kartaa si gebi ahaanba shakhsi ahaaneed. Ma xiisaynaysaa badeecadan? Hagaag, fiidiyowgaan waxaan ku sharaxeynaa dhammaan faahfaahinta ay tahay inaad ogaato kahor intaadan iibsan, ma aha oo kaliya inaad sifiican u ogaatid sheyga, laakiin inaad ogaatid inay runti u qalanto iyo in kale dhammaan howlahaas ay kugu siineyso nidaamka deegaanka ee Apple. Waxaa loo heli karaa boos celin laga bilaabo Abriil 23, waxaa si toos ah looga iibsan karaa Abriil 30, sidoo kale waxaa laga heli karaa dukaamada jirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » AirTag: hawlgalka, qaabeynta, xaddidnaanta ... dhammaantood waxaa lagu sharraxay fiidiyow